Voaro tevika connector ZOP-57, antsoina koa hoe IPC, dia natao Sampana fanompoana ny Voaro tsipika herinaratra avy amin'ny herinaratra lehibe tsipika, tsy nanapaka ny palitao ny tena tariby.
1. Ity karazana Insulation tevika clamp dia tena mateza sy mora ny fametrahana.
2. Area ny fampiasana dia tena malalaka, indrindra amin'ny mpitarika ny tsipika avy eny ambony nafatotra ho amboarany, ny tselatra sy ny trano eny an-dalana.
3. Tsy misy silicone lubricant ilaina
4. Big isan-karazany nampiharina habe ny mpitarika.
5. Material ny mpitarika ny: aluminium na varahina
6. Easy fametrahana, araka hex ambany manohana amin'ny lafiny IPC
7. vita tamin'ny UV mahatohitra polymer, Stainless vy fitaovana, aluminium shearhead-bazana.
Ny fiangonana rehetra nandalo fitsapana ny tensile, hetsika traikefa amin'ny mari-pana miainga amin'ny - 30 ° C hatramin'ny +50 ° C fitsapana, dielectrical malefaka fitsapana amin'ny rano, ny hafanana bisikileta fitsapana, fizahan-toetra be taona, harafesiny fanoherana fitsapana etc.
Main tsipika, mm2
Sampana tsipika, mm2
Waterproofed ABC insulation tevika connector azo nametraka amin'ny LV ABC telegrama Voaro tsy miandany amin'ny mpitondra hafatra tariby sy tena manohana 4 cores rafi-tariby. Applied ambony, ZOP-57 dia azo Voaro amin'ny telegrama Low malefaka vita amin'ny aluminium na fitaovana varahina. Low malefaka tariby connector ZOP-57 dia azo ampiasaina amin'ny tariby andalana niakatra ho any 1000Vac (1000 V).
Low malefaka connector ZOP-57 dia azo nanome na manokana na miaraka tahaka ny fiangonana hafa ilaina Low malefaka tariby Fittings, vatofantsika clamps, fampiatoana clamps, LV fononteny mahitsizoro, farango, izay eo amin'ny Jera LV ABC Fittings vokatra isan-karazany. Fittings tariby ambony hafa Optical dia mora ho haka araka ny milina fanoherana sy ny savaivony ny telegrama 'tariby ny mpitondra hafatra. Anchoring clamps azo nametraka amin'ny maty-end, roa maty-tariby mifarana lalana. Service clamps endrika mamela hanohitra ampy enta-mavesatra tsy misy tariby taratasy kely.
Previous: Insulation manindrona Connector, ZOP-54 (6-50 / 16-150)
Manaraka: Insulation Piercing Clamp, ZOPN-95
tariby avy eny ambony clamp
tariby ambony tevika
tariby tevika clamps
lafiny roa tap connector
mora tap connector
Voaro multitap connector
Voaro tevika connector
Voaro manindrona Connector for Germanys
Voaro manindrona Connectors Export ho any Romania
Voaro manindrona Connectors an'i Portiogaly
Voaro manindrona Connectors Wholesale ho US
Voaro tap connectors
malefaka tariby ambany Fittings
ambany malefaka connector ZOP-57
plastika indostrialy tevika
ambanin'ny tany tevika
Insulation manindrona Connector, ZOP-54 (6-50 / 16 -...
Voaro manindrona Connector, ZOP-52 (1.5-16 / 16 ...
OHL fihenjanana clamp, STC
Stainless Steel andilany Sus 201